နှစ်ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးမှ ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်နိုင်ပွဲကို ပဲ့လေစ်နဲ့ပွဲတွင် မော်ရင်ဟို ပိုင်ဆိုင်
6 Mar 2018 . 5:34 AM
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနည်းပြ မော်ရင်ဟိုရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်နည်းပြဘ၀သက်တမ်းမှာနှစ်ဂိုးရှုံးနိမ့်နေပါက နိုင်ပွဲပြန်လည်ရယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ ပဲလေ့စ်အသင်းနဲ့ပွဲမှာမှ ပထမဆုံးအကြိမ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ပဲလေ့စ်နဲ့ပွဲမတိုင်မီ မော်ရင်ဟိုရဲ့နှစ်ဂိုးရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲရလဒ်တွေက နှစ်ပွဲသရေ၊ (၁၉)ပွဲရှုံးခဲ့ပါတယ်။ ပဲ့လေစ်အသင်းရဲ့ တန်း ဆင်းဇုန်ရုန်းအားကြောင့် ယူနိုက်တက်ရဲ့ အခက်တွေ့ခဲ့ရပြီး ဦးဆောင်ဂိုး နှစ်ဂိုးပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်းရောက်မှ သုံးဂိုးသွင်းပြီး ပွဲအပြီးမှာ ပဲလေ့စ်ကို (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တာပါပဲ။ နည်းပြမော်ရင်ဟိုရဲ့ နှစ်ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ပြီးမှ ပထမဆုံးအနိုင်ရရှိတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲဖြစ်ခဲ့သလို ယူနိုက်တက်အတွက်လည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း နှစ်ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်နေပြီးမှ ပထမဆုံးအကြိမ်နိုင်ပွဲရခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ယူနိုက်တက်နည်းပြ မေ်ာရင်ဟိုရဲ့ နည်းဗျူဟာအပြောင်းအလဲတွေက အရေးပါခဲ့ပြီး နိုင်ပွဲရရှိခဲ့တာလို့ ဆိုရမယ်။
နှဈဂိုးပွတျရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီးမှ ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂျနိုငျပှဲကို ပဲ့လဈေနဲ့ပှဲတှငျ မျောရငျဟို ပိုငျဆိုငျ
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးနညျးပွ မျောရငျဟိုရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျနညျးပွဘဝသကျတမျးမှာနှဈဂိုးရှုံးနိမျ့နပေါက နိုငျပှဲပွနျလညျရယူနိုငျခွငျးမရှိခဲ့ဘဲ ပဲလစျေ့အသငျးနဲ့ပှဲမှာမှ ပထမဆုံးအကွိမျအနိုငျရရှိခဲ့ပါတယျ။
ပဲလစျေ့နဲ့ပှဲမတိုငျမီ မျောရငျဟိုရဲ့နှဈဂိုးရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂျပှဲရလဒျတှကေ နှဈပှဲသရေ၊ (၁၉)ပှဲရှုံးခဲ့ပါတယျ။ ပဲ့လဈေအသငျးရဲ့ တနျး ဆငျးဇုနျရုနျးအားကွောငျ့ ယူနိုကျတကျရဲ့ အခကျတှခေဲ့ရပွီး ဦးဆောငျဂိုး နှဈဂိုးပေးခဲ့ရပါတယျ။ ဒုတိယပိုငျးရောကျမှ သုံးဂိုးသှငျးပွီး ပှဲအပွီးမှာ ပဲလစျေ့ကို (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့တာပါပဲ။ နညျးပွမျောရငျဟိုရဲ့ နှဈဂိုးပွတျရှုံးနိမျ့ပွီးမှ ပထမဆုံးအနိုငျရရှိတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲဖွဈခဲ့သလို ယူနိုကျတကျအတှကျလညျး ၂၀၁၃ ခုနှဈနောကျပိုငျး နှဈဂိုးပွတျရှုံးနိမျ့နပွေီးမှ ပထမဆုံးအကွိမျနိုငျပှဲရခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီပှဲမှာ ယူနိုကျတကျနညျးပွ မျောရငျဟိုရဲ့ နညျးဗြူဟာအပွောငျးအလဲတှကေ အရေးပါခဲ့ပွီး နိုငျပှဲရရှိခဲ့တာလို့ ဆိုရမယျ။
မြို့ခံပြိုင်ဘက် မန်ယူအသင်းကို အရှက်ခွဲခဲ့တဲ့ မန်စီးတီး
by Naing Linn . 31 mins ago